In ka badan 80 -dumar Somaali ah oo qaarkood afka dhiig ka keenay kadib marlii ay ka soomeen cuntada - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa sii kordhaya Dhibaatooyinka iyo Tacadiyada ee la kulmayaan Muwaadiniin Badan oo Soomaaliyeed kuwaa oo ku xiran Xabsiyo kuyaala Dalka ukrain kadib markii la qabtay iyaga oo dalkaasi Tahriib kusii marayay.
Soomaalidan ku xiran Xabsiyada Dalkaasi ayaa la kulma tacaiyo kala duwan iyagoona halakasi ku xiran sanado badan mana jiraan Xukuno lagu riday iyo Xukun cadaalad ah oo la marsiiyay ta abadalkeedana ciqaab joogta ah la kulmaan.
Qaar kamid ah Haweenka Soomaaliyeed ee ku xiran Dalka Ukrain oo Tiradooda gaareyso 80- ayaa bilaabay in ay Cuntada kasoomaan iyagoo dalbanaya in laga sii daayao xabsiyada ciqaabta badan ee Ukrain loona celiyo Dalkooda sida uu Warbaahinta u sheegay mid kamid ah Maxaabiista Soomaaliyeed ee Dalkaasi ku xiran.
Dowlada Ukrain dhag jalaq uma siin Cunto kasoomida iyo dalabka Soomaalidan ku dhibaateesan Xabsiyada Dalkaasi iyadoona lasoo warinayo in qaar kamid ah Haween kaasi Afka dhiig ka keeneen Baahi daran oo qabatay iyo Ciqaab loogu sii daray.
Haween kaliya maahan Dadka kujira Xabsiyada Dalka Ukrain waxaa sidoo kale kujira Dhalinyaro badan oo iyagu horey u sheegeen in ay Nolosha ka samreen xaalad quus ahna ay kujiraan ayna ka samreen Codsiyo badan ay Dowlada KMG u direen taa oon looga soo jawaabin.
Soomaali tiro badan ayaa dhibataooyin xoogan ay ku heesatadaa Xabsiyo kuyaala Qaaradaha Afrika ,Yurub ,Asia iyo America kuwaa oo heesato dhibataooyin aad u xoogan mana helaan Xukuno iyo Cid u dooda oo xaalkooda wax ka qabata.